भक्तपुर घटना : छोरा र श्रीमतीको हत्या गरेपछि विष सेवन गरेर आत्महत्या ! - नेपालबहस
भक्तपुर घटना : छोरा र श्रीमतीको हत्या गरेपछि विष सेवन गरेर आत्महत्या !
| १९:५५:१३ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । घरमा स-सानो झगडा हुने गर्थ्याे, ठूलो होइन । कहिले कामले गर्दा । कहिले सानोतिनो निहुँले झगडा हुन्थ्यो । झगडा श्रीमान र श्रीमतीबाट नियन्त्रण बाहिर पुगेर छोरासम्मै पुग्थ्यो । आमाबुवाकै झगडाले छोरा पनि अनियन्त्रित भइसकेका थिए ।
तर भदौ तेस्रो हप्तामा घर परिवारमा झगडा मात्रै भएन । एकले अर्कोको ज्यान लिने अपराध नै निम्तियो । भक्तपुरको थिमी नगरपालिका ६ कुण्डोलका सुदीप अधिकारीले श्रीमती सम्झनाको हत्या नै गरे । आपसी विवाद र रिसकै झोकमा सुदीपले सम्झनाको टाउकोमा घनले हाने । त्यसपछि सम्झना चिच्याउन थालिन्, गुहार माग्न थालिन् । नजिकै रहेको छोराले आमालाई मार्न खोज्ने बुवामाथि आक्रमण गरे ।
रिसकै झोकमा रहेका सुदीपले छोरा सुशान्तको घाँटी छुराले रेटे । पहिले श्रीमतीलाई छुराले रेटेका सुदीपले पछि छोरालाई पनि बाँकी राखेनन् । सामान्य विवादमा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारा छोरा र श्रीमतिको हत्या गरेका सुदीप भने एकदिन पनि बाच्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् ।
रिसकाे झाेकमा आफ्नै अगाडी श्रीमती र छोराको लास मात्रै बाँकी राखेका सुदीपले यो संसारमा बाच्ने मन गरेनन् । त्यति मात्रै होइन, घरको एक्लो कुकुरलाई पनि साथमै लैजाने निर्णय गरे । छोरा र श्रीमतीको हत्या गरेको २४ घण्टापछि उनले खानामा हालेर कुकुरलाई विष पिलाए ।
केहीबेर कुकुर शान्त थियो । पछि विष सेवन गरेको कुकुरले बान्ता गर्न थाल्यो । बान्ता गर्दै भूईमा लडेको कुकुरको मृत्यु उनले सहजै हेर्न सकेनन् । त्यसपछि विषको बिर्को आफ्नो मुखमा खन्याएका सुदीप घरको छतमा गएर आफ्नो अपराध प्रायश्चित गरे ।
आफ्नो अपराधको सजाय आफैलाई दिएर उनले बिष पिएर घरको तेस्रो तलामा गएर तड्पी तड्पी यो संसार छाडे । जुन कुराको रहस्य ७२ घण्टासम्म बाहिर आएन् । भदौ २६ गते अधिकारीको घरमा पुगेका उनका भाईले सबैलाई मृत देखेपछि प्रहरीले खबर गरेका हुन् ।
झण्डै पाँच दिनपछि प्रहरीले एकै घरमा तीन जनाको शव भेटिएको घटनाको रहस्य बाहिर ल्याएको थियाे । मृतकको पोष्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार कुन्डोलका ३६ बर्षीय अधिकारीले श्रीमती र छोराको हत्या गरेपछि आफूले आत्महत्या गरेको देखिएको छ । उनले पत्नी ३४ वर्षीया सम्झना र छोरा १५ वर्षीय सुशान्तको हत्या गरेर २४ घण्टापछि विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेकाे प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
भुईतलासहित चार तले घरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा एकएक जनाको शव भेटिएपछि शंकास्पद मानिएको घटनामा कुकुर पनि मरेको भेटिएको थियो । घटना घटेको निश्चित नभएपनि शव कुहिन थालेर वरिपरि गन्हाएपछिकाे अवस्थामा तीनै जना मृत भेटिएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार सवै दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गर्दा बाहिरबाट अरु कोही गएर हत्या गरेको प्रमाण भेटिएको छैन् । मोबाइल फोनको कलडिटेल हेर्दा पनि कुनै ठूलो विवाद देखिएको छैन् । सुदीपले पहिले श्रीमतीको टाउकोमा घनले हानेर पछि छुरा प्रहार गरेर श्रीमति र छोराको हत्या गरेको पोष्टमार्टम रिर्पोटले देखाएको प्रहरी अनुसन्धानकाे निश्कर्ष छ ।
श्रीमती र छोराको हत्या गरेपछि सुदीपले सल्फस नामको विष सेवन गरेर हत्या गरेका थिए । उनले कुकुरलाई पनि खानामा विष हालेर खुवाएका कारण कुकुर मरेको पाइएको प्रहरीको भनाई छ ।
विभिन्न मुद्दाका फरार दश प्रतिवादी पक्राउ १४ मिनेट पहिले
आजबाट “सेफ्टी पीन अभियानका” लागि प्रहरी परिचालन ११ घण्टा पहिले
प्रहरीको चेतनामूलक घुम्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न १२ घण्टा पहिले
मटर तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै महोत्तरी २१ घण्टा पहिले
असोज १४ गते बुधबारको राशीफल १ मिनेट पहिले
अयोध्याधामका लागि माडी नगरपालिकाले छुट्यायो १०० बिघा जग्गा १७ मिनेट पहिले
सैनिक–नागरिक सम्बन्ध कार्यक्रम पछिल्लो समय तीव्रता २६ मिनेट पहिले